China Automatic Door spray Washer Manufacturer and Supplier | Shinva
Akpanaka-A-520 Akpaka Washer-disinfector bụ elu oru oma saa ngwá na-eme nnyocha na mepụtara dị ka ụlọ ọgwụ n'ezie ọnọdụ. A na-eji ya maka ịsacha na disinfection nke arịa ịwa ahụ, ngwongwo, trays ahụike na efere, ngwá ọrụ nhụjuanya na eriri eriri n'ụlọ ọgwụ CSSD ma ọ bụ ime ụlọ ọrụ. Ihe kachasị mma nke akụrụngwa bụ ịchekwa ọrụ na ngwa ngwa ngwa ngwa nke nwere ike belata oge 1/3 ọrụ karịa mgbe ọ bụla.
■ Ezigbo ụlọ imewe na usoro
Thelọ a na-atụgharị anya na SUS316L na-agbatị n'otu oge na-enweghị nkuku nwụrụ anwụ na nkwonkwo ọkụ, nke ka mma maka ịmịcha mmiri na ịchekwa mmiri.
Ent Ọgụgụ isi na-achịkwa usoro
Ugboro abụọ n'akụkụ ọnụ ụzọ na-agba ọsọ na-agba ọsọ, na-achịkwa ihuenyo mmetụ, nke dị mma na nchekwa. Usoro usoro ihe ọmụma bụ PLC na-achịkwa, ọ dịghị mkpa njikwa njikwa. All okpomọkụ, nrụgide, oge, usoro nkebi, mkpu nwere ike na-egosi na ihuenyo mmetụ na-na-e dere site wuru na-ebi akwụkwọ.
■ Mmemme dị iche iche
Ihe omume atọrọ 11 na mmemme akọwapụtara onye ọrụ 21 nke enwere ike ịkọwa dịka ihe onye ọrụ chọrọ
Easy loading na ebutu
Akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ usoro akpaka maka ibudata na ibudata dị. Rasa ogbe, nyefee trolley na ime usoro, dabara na imewe nke ergonomics, mfe iji rụọ ọrụ na a pụrụ isi chọta.
Saving Nchekwa ike
Washingsa ụlọ na mma mmiri ịzọpụta Ọdịdị; Tanksgbọ mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ na usoro pụrụ iche na-ebili na ikpo ọkụ na nhazi pipeline na-eme ka ọ chekwaa 30% mmiri na oriri ike karịa mgbe ọ bụla.
■ Ọsọ ọsọ na arụmọrụ dị elu
Rapid-A-520 bụ otu n'ime ngwa ngwa-disinfector na ụwa, nke a na-agbadata oge ọkọlọtọ ka 28mins gụnyere ịsacha, ịsa ahụ, mbido 1, mbido 2, disinfection na ihicha. Ka ọ dị ugbu a, ọ nwere ike ịhazi 15 DIN trays kwa okirikiri.
Usoro preheat mmiri belatara oge nkwadebe, ọ nweghị oge nchere oge oge ịgba ọsọ.
Nke gara aga: Akpaka na-agbanwe agbanwe Endoscope Washer Disinfector
Osote: High Energy Medical Electron Linear ome osooso
Kaseti hydrogen peroxide
Led-Free Steam Sterilization Indicator Mezie
Neutral Multienzyme nhicha Ukwu maka Medical ...
Akpaghị aka tree ụgbọelu Ultrasonic Washers
Trolley Ladder (akwa abụọ)
Ugboro abụọ ụzọ interlock nyefe window (Otu unit)